Maskax-yaqaanku: Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato qalabkan | Saadaasha Shabakadda
Maanta waxaan u nimid inaan sharaxaad ka bixinno hawlgalka mid ka mid ah qalabka cabbiraadda saadaasha hawada. Waan ka hadli doonaa cilmi nafsiga. Waa aalad loo adeegsado in lagu cabbiro nuxurka uumiga biyaha ee safka hawada. Ogaanshaha uumiga biyaha ee jawiga waa muhiim si loo go'aamiyo heerka huurka.
Haddii aad rabto inaad barato sida loo maareeyo maskaxda, dhammaan astaamaheeda iyo daryeelka ay u baahan tahay, kani waa boostadaada.
1 Waa maxay cilmi nafsiga
2 Sida loo isticmaalo cilmi nafsiga
3 Heerkulka iyo huurka
4 Daryeelka ay tahay in laga qaado si loo akhriyo si wanaagsan
5 Dayactirka lagama maarmaanka ah
Waa maxay cilmi nafsiga
Sidii aan ku sheegnay hordhaca, waa qalab lagu cabiro uumiga biyaha hawada. Si tan loo sameeyo, waxay ka kooban tahay labo ka mid ah heerkulbeegyada dhalada leh tiirka meerkuriga (sida heerkulbeegyadii hore). Waxay ku rakiban yihiin saxan. Midkood waxaa lagu magacaabaa guluub qalalan midka kalena waxaa loo yaqaan guluub qoyan. Waxaa loogu magac daray gelinta guluubka meerkurida dabool ama dahaarka maro cudbi ah oo loo yaqaan muslin, taas oo u baahan in la qoyo si loo helo tilmaamaha loo baahan yahay.
Guluubka qoyan waxaa ku daboolan muslin nadiif ah waxaana ku cabiray biyo kahor intaan la eegin. Marka guluubka hawo la saaro, waxay muujin doontaa heerkulka guluubka qoyan iyo kan kale ee guluubka qalalan.
Sida loo isticmaalo cilmi nafsiga
Si loo helo heerkulka ay ku cabbireen labada nal, talaabooyinka soo socda ayaa loo baahan yahay in la qabto.
Waa inaan aqrinaa heerkulbeegga guluubka qalalan ee ku soo dhowaanaya darajada tobnaad. Heerkulkaasi wuxuu calaamadeeyaa heerkulka deegaanka.
Waxaan ku qoynin muruqyada heerkulbeegga guluub qoyan illaa iyo inta jeer ama inta jeer ee loo baahdo biyo nadiif ah illaa dhibic ay ka samaysmaan gunta.
Si aad u qoyso muslinka waa inaanu yeelan maskax-maskaxeed ku xeran gudaha jaakada cimilada. Waa in loo qaadaa weel biyo ku jira maskaxda maskaxda si guluubka muslinku ku dhex quusto dareeraha.
Guud ahaan, biyaha waa in lagu hayaa weel quraarad ah oo la dhex dhigo hoyga cimilada. Goor dambe ayaan sharxi doonnaa jaakadda si aan si fiican ugu ogaanno. Waa lagama maarmaan in la isku dayo in weelka la daboolo si biyuhu u ahaadaan kuwo nadiif ah oo qoyaanka ku jira hoyga cimilada aan la beddelin.
Waxa jira wakhtiyo qoyaanku aad u sarreeyo. Xaaladdaan muslinku wuxuu umuuqan karaa mid qoyan, laakiin wuxuu ubaahan doonaa markale inuu qoyo. Haddii heerkulka deegaanku sarreeyo ama qoyaanku aad u hooseeyo, Waxaad u baahan doontaa inaad qoyso muruqa muddo dheer oo ay ku qalajiso. Kormeeraha ayaa qiyaasi kara in heerkulka guluubku uu noqon doono 0 digrii ama ka yar qabowga daarmaya.
Heerkulka iyo huurka
Haddii muslinku qallalo kahor intaysan heer-kulku tilmaamin heerkulka guluubka saxda ah, waxaan sameyneynaa cabbir qaldan.
Waxaa jira cimilo badan iyo heerkulka adduunka oo dhan. Sidaa darteed, waxaa jira gobollo heer kulkoodu sarreeyo oo qoyaanku hooseeyo. Kuwani waa meelaha lamadegaanka ama lamadegaanka ah. Waqtiyadaan oo kale waa inaan isticmaalnaa biyo macaan si aan u qoyo muruqa ugana ilaalino qalaylka waqtigiisa.
Si ay biyuhu u ahaadaan kuwo qabow, waxaa lagu hayn karaa weel daloola, laakiin isku dayga in looga tago weelka banaanka jaakada si looga fogaado in wax looga beddelo huurka ku jira gudaha
Tallaabo kale oo la qaado si loo helo cilmu-nafsiga shaqadu waa in la wado marawaxadda si loo helo hawo joogto ah. Hawadaani waa inay dhex marto nalalka heerkulbeegyada cabbir sax ah. Xaaladda cabbiraadda la sameeyo habeenkii, toosh waa in la adeegsadaa. Haddii cilmu-nafsiga ee aan adeegsanno uu yahay wadhaf, waa inaan ku rognaa xawaare ah afar kacdoon halkii labaad. Xawaaraha wareejinkan waxaa loo isticmaalaa in lagu qaado aqrin deg deg ah. Waa marka ay tahay inaad tartiib tartiib u istaagtid oo aad u qaadatid akhriska hooska.
Waa inaan sidoo kale hawo qaadnaa muddo ku filan seddex daqiiqo. Meerkuri ku jira heerkulbeegga waa inuu joojiyaa soo degitaankiisa oo uu gaaraa dhererkiisa safka ugu yar. Akhrinta waa in lagu qaataa iyadoo lagu qiyaasayo qiyamka toban meelood. Qiimaha aan heli doono wuxuu noqon doonaa kan heerkulka guluubka qoyan.
Waan dami doonnaa marawaxadaha haddii aan sameyno indho indheyn habeen ah, waan dami doonnaa diiradda.
Haddii heerkulka hawadu ka yar yahay ama u dhiganta 3 darajo, waa lagama maarmaan in muslin lagu qoyo biyo heerkulkiisu sarreeyo. Tani waxay gabi ahaanba ku dhalaali doontaa wax kasta oo baraf ah oo ku soo baxa guluubka heerkulbeegga ama murqaha laftiisa.
Daryeelka ay tahay in laga qaado si loo akhriyo si wanaagsan
Haddii aan rabno inaan xogta u qaadanno sida ugu macquulsan ee suurtagal ah, waa inaan tixgelinno dhinacyada qaarkood:
Markii aan aqrino heerkulbeegyada, waa inaan istaagno masaafo ku habboon oo qiyaastii 30 cm ah ama ka weyn si looga fogaado in kuleylka jirkeennu uu saameyn ku yeesho heerkulka heerkulbeegga. Sidan oo kale waxaan ku heli doonnaa aqrin sax ah
Xilligaas aad u dhow, hubi in khadka araggu uu la mid yahay meniscus-ka dareeraha isla markaana u dhigma heerkulbeegyada. Sidan ayaan uga fogaan doonnaa qaladaadka isku midka ah.
Haddii akhriska heerkulbeegga la sameeyo habeenkii, waa inaan ilayska korontada shidanaa waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah oo aanaan keenin aaladda agteeda. Haddii kale waxay saameyn ku yeelan doontaa qaadashada heerkulka.
Haddii mashiinka mashiinka mashiinka la isticmaalo, way ka yar tahay in lagu sameeyo banaanka iyo hooska u dhow goobta indha indheynta dareenka.
Dayactirka lagama maarmaanka ah
Hoyga saadaasha hawadu waa aaladda soo bandhigisteeda ay tahay tilmaamaha ugu wanaagsan ee daryeel ee kormeere uu ku leeyahay Saldhigiisa. Labaduba waxay ubaahanyihiin xoogaa daryeel ah si loo ilaaliyo. Kuwani waa daryeelka:
Coat nadiifinta ugu yaraan hal mar maalintii ka qaad wasakhda iyo siigada dagi karta.
Rinjiga waa inuu ahaadaa mid wanaagsan. Waa ku filan tahay in la rinjiyeeyo lixdii biloodba mar. Haddii saldhiggu u dhow yahay xeebta waxaa fiican in la rinjiyeeyo saddexdii biloodba mar.
Ka dib markii la dhammeeyo kormeerkii ugu dambeeyay ee maalinta, beddel biyaha loo isticmaalo in lagu qoyo muslinka heerkulbeeg guluub qoyan. Waxaan sidoo kale dhaqi doonaa weelka ay ku jirto.
Toddobaadkiiba hal mar beddel muslinka.
Macluumaadkan waxaad ku baran kartaa sida loo isticmaalo cilmi nafsiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Maskaxda dhimirka